Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii u Socday Xubnaha Jaaliyada S.Ogadeenya oo guul lagu soo Gaba-gabeeyey.
Shirkii u Socday Xubnaha Jaaliyada S.Ogadeenya oo guul lagu soo Gaba-gabeeyey.
Posted by ONA Admin	/ September 6, 2011
Oslo-06-Sep-11- Waxaa maalintii shalay ahayd si guul ah kusoo gaba-gaboobay, shirkii xubanha Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway, uga socday magaalada Oslo. Kulankan oo ahaa kii koobaad ee qabsooma Bishii Ramadaan kadib, ayaa waxaa ugu horeyntiiba Aayado qur’aan ah ku furay Sheekh Ahmed Mohamed, oo kula dardaaramay dhamaan dadkii soo xaadiray shirka inay u duceeyaan walaalahooda dulman ee gumeysatada Itoobiya dhibaatada ku hayaan, kana qeyb-qataan talaabo walba oo looga hortagi karo xasuuqa uu wado Kaligii taliyaha Zenawi iyo Maleeshiyaadkiisa dad layska ah.
Waxaa hadalka la wareegay Gudoomiyaha Jaaliyada S. Ogadeenya ee dalka Norway, Mudane Abdirahman Sheekh Yusuf, oo qeybiyey Ajendaha shirka, isagoo jeediyey warbixino dhawr ah oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay maamulka Jaaliyada iyo qorsheyaashii u astaysnaa Jaaliyada Mudadii labada bilood ahayd ee tagtay iyo hawlaha wali dhiman ee sugaya in la fuliyo. Gudoomiyaha ayaa ku dheeraaday wax-qabadyadii kala duwanaa ee Jaaliyadu ku talaabsatay muddadan dambe, iyo dadaallada balaadhan ee ay ugu jiraan sidii qaddiyada Ogadeenya u geyn lahaayeen maxfalada (goobaha) aduunka islamarkaasna ugu kasbi lahaayeen saaxiibo caalami ah.
Sidoo kale, Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee Jaaliyadda Soomaalida Norway, Mudane Asad Daahir, ayaa sheegay hawlihii abaabul ee u qabsoomay mudadii labada bilood ahayd ee tagtay, kulano kala duwan oo ay la yeesheen hay’ado iyo ururo caalami oo intaba xambaarsanaa taageerooyin siyaasadeed iyo mid kaleba kadib, ayuu hogaanku baaq u soo jeediyey bulshada Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway ku dhaqan inay isu diyaariyaan ka qeyb-galka Mudaaharaadka 19-September ka dhacaya dalka Belgium, caasimadiisa Brussels, isagoo raacshay muhiimada balaadhan ee qadiyada shacabka dulman ee Ogadeenya u leeyahay dhagaysiga guddiga xuquuqul insaanka ee la filayo uu ka dhaco Brussels iyo tabinta fariinta waajibka ah ee shacabka Ogadeenya inaga sugayo.
Hogaanka Arimaha Haweenka Marwo Hodan iyo Hogaanka Arimaha Ururka ee Jaaliyada Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway, Mudane Abdi Shakuur, ayaa si kooban uga hadlaya hawlaha u dejisan inay qabtaan sida ugu dhakhsaha badan. Labada hoggaan ayaa xubnaha goobta soo xaadiray u sheegay inay war-bixino waafi ah soo diyarain doonaan fadhiga kan xiga iyo wax-qabad la taaban karo.
Xoghayeha Jaaliyada Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway, Mudane Abdirahman Ali, ayaa u sheegay wakaaladda Wararka ee Ogadeenya (ONA), inay fuleen badi qorsheyaashii maamulka Jaaliyadu u soo gudbiyeen xubnaha inta dhimanna si iskaashi iyo midnimo ku dheehan tahay loo dar-dar gelin doono muddo gaaban gudahood. Waxaana uu sheegay inay xubnaha Jaaliyada isla meel dhigeen ansixiyeena qodobada hoos ku qoran:
1- In si wadajir ah oo gacan kaliya ah loo fuliyo dhamaan hawlaha lagu horumarinayo wax-qabadka Jaaliyada iyo tayadda xubnaha katirsan.
2- In si xawli ah loo labo-jibbaaro isku-xidhka dhamaan hawlaha wax-qabad, kaalin muuqatadana xubin walba ka qaato waajibka ka saaran difaacidda iyo u hiilinta Shacabka dulman ee Ogadeenya.
3- In si toos ah u cambaareynayaan xubnuhu, shirkadaha dhuuni-raaca ah ee doonaya inay ka macaashaan dhiiga Shacabka dulman ee Ogadeenya, islamarkaasna kala kulmi doonaan cawaaqib xumo aan la mahdin doonin haddii aysan damacaas joojin.
3- In Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway oo kaashanaysa ururka dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeenya Faraciisa Norway, ay isku kaashadaan kana war-hayaan dhamaan ardayda uu u bilowday sanad-dugsiyeedka, iyagoo ku baraarujinaya dalka ay ka soo jeedaan ee Ogadeenya iyo qiimaha wax-barashadu u leedahay la dagaalanka gumeysatada madow ee Tigreega. Waxayna intaas, raacsheen in sare u qaadis dhinac walba ah oo mideynsan lagu sameyn doono wax-qabadka ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadeenya, oo laf-dhabar iyo Lixaadba u ah halganka Woyaanaha looga xoreynayo dhulka iyo Shacabka Ogadeenya.
Jaaliyadda soomaalida Ogaadeenya ee Norwey guulaysta sii giijiya